ဘဝမှတ်တိုင်: G-Mail , Facebook , Yahoo , etc... Accounts တွေ ကို Hack ချင်သူများအတွက် - Mojo Logger အသုံးပြု့ နည်း ( E-Book + Software)
G-Mail , Facebook , Yahoo , etc... Accounts တွေ ကို Hack ချင်သူများအတွက် - Mojo Logger အသုံးပြု့ နည်း ( E-Book + Software)
နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူများထက်ခြေတစ်လှမ်းနောက်မကျစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခု Hacking စာအုပ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးသားသူကတော့ မင်းစိုးရာဇာဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ် ထဲမှာ Mojo Logger အသုံးပြုပြီး Hacking နည်းလမ်းကို ပုံနှင့်တကွအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ဗျာ။ သာမန် User တွေကိုကောင်းကောင်းကြီး Hack နိုင်မှာသေချာပါတယ်။ လေ့လာဖို့အတွက်သာတင်ပေး လိုက်တာပါနော်။ သူများကို အနှောက်အယှက်မပေးစေချင်ပါဘူး။ စာအုပ်လေးကလည်း 1.98MB ဘဲရှိပါ တယ်။ Software ကလည်း 1MB တောင်မရှိပါဘူးဗျာ။ အောက်က Link မှာ စာအုပ်ရော Software ပါ ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/17/2014 11:05:00 pm
Automatic Call Recorder Pro v3.66 APK
Android Devices တွေအတွက် မြန်မာဖေါင့်မျိုးစုံ နှင်...
Samsung Galaxy Grand2(SM-G7102) ကို Root လုပ်နည်...
Android booster 1.9.0 Android App (2014).apkလေးပါ
Lenovo K900 Custom Romသွင်းနည်း (VIBEROM_V1.0_1347...
Huawei Ascend P6 မှာ root ဖေါက်နည်းနှင့် CWM သွင်း...
Ascend P6 4.4.2 Beta Romသွင်းနည်း
" သင့် facebook အကောင့် ဟက်ခံရပြီးဆိုရင် "
Android ဖုန်းရဲ့ SD card performance ကို higher sp...
Vidstitch Pro - Video Collage v1.3 APK
Forest HD v1.6 လေးကိုဒေါင်းရန်။
Facebook က ဓါတ်ပုံတွေကို Album အလိုက် တခါတည်းဒေါင်...
video ဖိုင်တွေဖြတ်မယ် APK
Photo SlideShow လုပ်လို့ရတဲ့ Apk
ဓာတ်ပုံလှလှလေးကို Frame ဘောင်လှလှလေးနဲ့လုပ်ကြမယ် ...
Vault v5.0.04.22 App For Android
Samsung USB Drivers for Mobile Phones 1.5.34.0
အင်တာနက် ၅ မိနစ်ဖွင့်ရုံနဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးအကြောင်း သ...
Sony Xperia Z2 ထွက်ပြီ
Tablet ကို အသုံးပြု့သူများအတွက်လေ့လာသင့်သော The Ul...
ဟန်းဆက်များနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများကို ဝန်ထမ်းများအား ...
မန်းတွင် ၁၅၀၀ ကျပ်တန် မိုဘိုင်းဖုန်း လိုင်းကတ် ပြင...
Sony Android ဖုန်း တွေအတွက် SONY Zawgyi Installer ...
Samsung က Galaxy S5 ကို ကြေညာပြီ
ဆရာတော်တို့ ၏တရားများကို ဖုန်းမှာ တိုက်ရိုက်နားဆင်...
C8815 အတွက်အသုံးဝင် tools များစုစည်းမှု
Samsung ဖုန်းတွေအတွက်လိုအပ်သည့် Update Firmware မျ...
တရုတ် IPhone လို့ အမည်တွင်တဲ့ Xiaomi MI-3
♥♥♥Photoshop For Frames Png (17.54MB)♥♥♥
♥♥♥Photoshop For Frame Png (1.89MB)♥♥♥
တာရာမင်းဝေ စာအုပ် ဖတ်ချင်ရင် 42 အုပ် တစ်ခါထဲ ဒေါင်...
စာရေးဆရာမ ကြည်အေး၏ စာအုပ် 8အုပ် စုစည်းမှု ဒေါင်းလုပ...
ဆရာချစ်စံဝင်း၏ စာအုပ် 25အုပ် ဖိုင်တစ်ခုနဲ့ စုစည်းထ...
♥♥♥Photo Calendar Studio 2014 1.13 Full Version Se...
✔Anti Theft Alarm v1.2.2 App For Andrid ✔
Y320-C00 Service Tool ( 73 , 31 ဖုန်းများ Simcard ...
iOS7& 7.0 xx Jailbreak တွေမှာ AppSync ထည့်မရလို့...
✔Equlaizer Plus PRO v0.7 For Android ✔
GSM Arena for Android
ဓါတ်ပုံရိုက် / ဓါတ်ပုံပြင် ၀ါသနာပါသူတွေအတွက် Featu...
Huawei G730-U00 Lastest firmware B131 Link
Huawei G610-U00 နောက်ဆုံးထွက် B145 Official firmwa...
ExDialer - Dialer & Contacts v165 Apk 2MB
စာအုပ် စုဆောင်းလိုသူများ ဆရာ ချစ်ဦးညို၏ စာအုပ် 27...
Huawei ဖုန်းတွေမှာ Gmail, Gtalk , Google Play တွေ ...
သူငယ်ချင်းတို့အကြိုက်လေး Camera360 Ultimate Apk 5....
ဖုန်းခေါ်ဆိုခ အံ့သြစရာ နှုန်းထားဖြင့် Ooredoo ဈေးလေ...
Font Style ပြောင်းလို့ မရတဲ့ Android ဖုန်းတစ်ချို့...
SD Card ကို Phone Storage လုပ်မယ် ( Root Need )
PC Cleaner Pro 2014 12.1.14.1.15 Full Versin Seria...
ROEHSOFT RAM EXPANDER (SWAP) 2.16 APK ( ဖုန်းမှာ R...
ANDROID ဖုန်းတွေမှာ MEMORY အလိုအလျောက်ပြည့်လာတာကို...
မြန်မာ- ထိုင်း- မလေးရှား အကြား မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းဖြ...
Android Phone တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ ...
မြန်မာပြည်က Android ဖုန်းတွေအတွက် ရှိသင့်တဲ့ မြန်မ...
စာအုပ်စုဆောင်းလိုသူများအတွက် စာရေးဆရာမ ဂျူး၏ ၀တ္ထု...
AMC Security- Antivirus, Clean Apk (for android )
MP3 သီချင်းတွေကို karaoke ဆိုကြည့်ရအောင်
MM Breaking News.apk မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး we...
မီးတောက် Wallpaper For Android
Android Phone ပျောက်သွားလား? ဒီနည်းတွေနဲ့ ရှာပါ
ဖုန်း Memory ပြည့်နေလား... App 2Sd ကိုအသုံးပြီး SD...
18+Game ယောက်ကျားလေးများသီးသန့် - My Virtual Girlf...
G-Mail , Facebook , Yahoo , etc... Accounts တွေ ကု...
VIDEO တွေကို စိတ်ကြိုက်တည်းဖြတ်နိူင်ဖို့ အတွက် VID...
Window Phone တွေမှာ Font ထည့်သွင်းနည်း
Auto Call Recorder Pro - For Android
Sony Android 4.0 အထက်အားလုံးအတွက် မည့်သည့်ဖောင့်မှ...
Facebook ရဲ့ Connection Lost Tap to Retry ပြသနာဖြေ...
Fast Pro For Facebook - For Android
Samsung 4.3 အထက်အတွက် SmartZawgyi 4.3 Bat
IOS7မှာမှပါတဲ့ Control Center လေးကို Android မှာ...
HTC M8 မှာ ကင်မရာ ၃ လုံးပါရှိ
Saumsung Galaxy S5 ကို မြင်တွေ့ရဖို့ သိတ်မကြာတော့
ှSony Xperia G
(၀၀၈) LG L5 II Review
✔System Contorl Pro v1.6.1 Latest Version App for ...
ယနေ့ထွက် Viber 4.2.1.1 UPDATE
တရုပ်ဖုန်းပေါင်းများစွာကို Root ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့ -...
Advanced MobileCare v3.4.1 Apk (7 MB)
MM Website Directory-8 apk
yuotube player အသစ်လေး SuperTube Pro
Battery HD Pro v1.33 APK
ဆက်သွယ်ရေး နည်းဥပဒေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ စံချ...
ချစ်သူများအတွက် Valentine day Ringtone